Temple Run2v1.19.1 [Unlimited Gold+Gems] MOD APK (Android Games ) - Software Guide
Home / Andriod Game / Temple Run2v1.19.1 [Unlimited Gold+Gems] MOD APK (Android Games )
Temple Run2v1.19.1 [Unlimited Gold+Gems] MOD APK (Android Games ) Reviewed by Ko Lin on 1:16:00 AM Rating: 5
Temple Run2v1.19.1 [Unlimited Gold+Gems] MOD APK (Android Games )
Ko Lin 1:16:00 AM Andriod Game
Temple Run ကတော့လူတိုင်းသိပြီးသား လူကြိုက်များ Game တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အခုလည်း Version အသစ်လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အခုထွက်လာတဲ့ Version အသစ်မှာတော့ ယခင် Version အဟောင်းနဲ့မတူတော့တဲ့ ပုံစံအသစ်တွေနဲ့ ထွက်လာ တာဖြစ်တဲ့အတွက် ကစားသူများအ တွက် တမျိုးဆန်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ နောက်ပြီးပြေးလမ်းအသစ်တွေ ကလည်းတော်တော်လေး ကစားလို့ကောင်ပါတယ်ဗျာ။ ပြီးတော့ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ နဲ့ကစားနိုင်အောင် ပိုက်ဆံတွေကိုပါ Hack ထားတဲ့ Unlimited Money အနေနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါ တယ်။ Unlimited ဆိုတော့ ပြေးချင်တဲ့ သူကိုစိတ်ကြိုက်ဝယ်ပြီးပြေးနိုင်တာပေါ့ဗျာ။ အေးအေးဆေးဆေးကစားရုံပါဘဲ။
Android OS 2.3.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
With overazillion downloads, Temple Run redefined mobile gaming. Now get more of the exhilarating running, jumping, turning and sliding you love in Temple Run 2! The most dangerous and fascinating adventure passing on the road fromagold brick!.Navigate perilous cliffs, zip lines, mines and forests as you try to escape with the cursed idol. How far can you
Guy, Scarlett and the gang find themselves inaforbidding new land, full of new obstacles and challenges. Surf the ice luge, race across the frozen forests,
Unlock new outfits, and above all, beware the snowy Demon Monkeys which lurk behind every corner!
1.19.1 – Update Fixes black screen issues on Tegra devices